Khiyaanooyinka lagu tirtiro codsiyada ku jira Windows | Wararka Gadget
Beddelka si loo tirtiro barnaamijyada Windows
Websaydhka waxaa ku jira kuwa horumariya oo soo jeediyay qalab aad u tiro badan oo naga caawin kara tirtir codsiyada Windows ama darawalada, kaas oo matali kara ruqsad la bixiyay iyo kuwa kale oo gebi ahaanba bilaash ah Qoraal hore waxaan kugula talinay in la isticmaalo aalad xiise leh oo naga caawin karta "in lagu qasbo saarida" codsiyada ay adagtahay in laga saaro nidaamkayaga hawlgalka.
Noocyada noocan ah waxay ku habboon yihiin oo keliya marka ay dhibaato ka jirto ka-saarista barnaamijyada Windows-ka, wax aan caadi ahayn oo sidaas darteed, noocyada kale ee beddelka ah waa in la adeegsadaa; ka hor inta aan lagu degdegin isticmaalka codsiyada dhaawici kara diiwaanka Windows, way fiicnaan laheyd in la isku dayo in la isticmaalo qaar ka mid ah waxyaabahaas beddelka ah, kuwaas oo aan matali doonin nooc kasta oo khatar ah ama waxyeello u geysanaya nidaamka qalliinka.
1 Beddelka ugu horreeya ee laga tirtiro codsiyada Windows
2 Beddelka labaad ee Uninstall codsiyada Windows
3 Beddelka saddexaad ee barnaamijyada Uninstall ee Windows
Beddelka ugu horreeya ee laga tirtiro codsiyada Windows
Hababka iyo beddelka aan hoos ku soo bandhigi doonno waxaa lagu dabaqi karaa Windows 7 iyo nooca ugu dambeeyay. Kala-beddelkan koowaad, waxaan kuu soo jeedin doonnaa tallaabooyinka soo socda:
Waxaan ku wajahan nahay «Guddiga Xakamaynta»Windows
Ikhtiyaarrada la muujiyay waxaan ka dooranay «Barnaamijyada-> Uninstall barnaamij«.
Liistada ka muuqata, waxaan laba-gujineynaa dalabka aan dooneyno inaan ka tirtirno.
Daaqad xaqiijin ah ayaa laga yaabaa inay u muuqato inay qabato hawshan.
Sanduuq dheeri ah ayaa sidoo kale soo muuqan kara, kaas oo noo oggolaan doona inaan ka saarno qaabeynta ama baabi'inno raadadka qaarkood ee dalabka la xushay.
Aynu xaqiijino ficilkeena adigoo riixaya badhanka OK ee daaqada.
Taasi waa waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan ku sameyno tan kale ee ugu horeysa, iyadoo laga yaabo inay lagama maarmaan tahay, inaan dib u bilowno Windows si isbedeladu u dhaqan galaan; habka waa ansax sidoo kale markaan rabno ka tirtiro darawalada qalab lagu rakibay Windows.
Beddelka labaad ee Uninstall codsiyada Windows
Beddelka labaad ee aan hoos ku xusi doonno waa la isticmaali karaa marka codsi ama darawal aan dooneyno inaan ka saarno ay la xiriiraan qalab gaar ah. Si tan loo sameeyo, waa inaan galnaa aagga ay aaladahayaga oo dhami ku yaalliin, anagoo awood u leh inaan ku xaqiijino hadafkeena talaabooyinka soo socda:
Waxaan helnaa astaanta «My PC»On desktop Windows (ma ahan toobiye).
Waxaan ku xulannaa badhanka midig ee midig, halka aan ka dooranayna menu-ka macnaha guud leh «guryaha«.
Dhinaca bidix ee bidix waxaan ka dooranaynaa ikhtiyaarka oranaya «Maamulaha qalabka«.
Daaqad cusub ayaa furi doonta, waana inaad tagtaa «Maareeye«.
Halkaas waxaan kaliya ku dooran doonnaa tabka oranaya «KorontoKa dibna ku xir daaqadda «in la aqbalo«.
Sidii aan horeyba u soo jeedinay, nidaamkani wuu ku caawin karaa markii loo baahdo Ka tirtir barnaamijyada qaar ee ku xiran qalabka, taasi waa, xakamaynta suurtagalka ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in dib loo bilaabo nidaamka qalliinka si isbeddeladu u dhaqan galaan.
Beddelka saddexaad ee barnaamijyada Uninstall ee Windows
Haddii sababo jira awgood kuwa kale ee kor lagu soo sheegay aysan dhaqan gelin, mid dheeri ah ayaa la isticmaali karaa, kaas oo marka hore ku tiirsanaan doona adeegsiga daaqadda terminal-ka amarka, taas oo soo jeedinaysa in wac "amarka degdegga ah" (cmd) laakiin leh rukhsad maamul; tan, waa inaan kaliya:
Guji badhanka «bilow menu»Windows.
Qor erayga «cmdIyo natiijooyinka, dooro ikhtiyaarka noo oggolaan doona inaan ku fulino rukhsadda maamulka.
Haddii kale Windows 8 waxaan xaq u-riixi karnaa astaamaha menu-ka bilowga oo waxaan ku dooran karnaa amarka degdegga ah oggolaanshaha maamulka.
Marka uu furmo dariishadda amarka, waa inaan qornaa tilmaamaha soo socda ka dibna riix «furaha».galaan«.
Tallaabooyinka aan kor ku soo sheegnay, feyl feyl ah ayaa laga soo saari doonaa muraayadda Windows-ka, in kasta oo haddii aan rabno inaan beddelno goobta aan ku sameyn karno si deggan oo dhib la'aan wax ka beddelka jumladda qaybta ugu dambaysa ee beddelaysa dariiqa «Desktop».
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto jumlada la yiri sida ay tahay si loo helo faylka la soo saaray si toos ah dusha desktop-ka.
Marka feylka la soo saaro waxaan kaliya laba jibbaareynaa si aan isla markiiba u fureyno, oo aan u imanayo qaybta labaad ee khiyaanada; feylkan txt wuxuu noqon doonaa liistada dhammaan wadayaasha rakibay in Windows, isagoo helaya soo saaraha mid ka mid ah oo aan u baahanahay in aad Uninstall iyo barnaamijkeeda.
Waxa ay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano liistada waxaa laga helayaa qeyb ka mid ah «Magaca Daabac», iyadoo la tixgelinayo feylka uu magac ku yaal «oemxx.inf». Haddii aan helnay, hadda waa inaan ku qornaa waxyaabaha soo socda isla isla qaybta amarka:
Haddii aan ku dhaqaaqnay qaabkii aan kugula talinay, darawalada iyo softiweerka ku xiran midka aan dooranay gabi ahaanba waa laga joojin doonaa.
Saddexdaan beddel ee aan soo sheegnay, waxaan horeyba u dooran karnaa midkood si aan u tirtirno nooc ka mid ah dalabka in kastoo, waxaan kugula talin karnaa taas isticmaalkeeda si wax ku ool ah ayaa loogu adeegsan karaa kantaroolayaasha qalab gaar ah ama qalab ku dhex jira Windows-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Beddelka si loo tirtiro barnaamijyada Windows
32 ama 64 xoogaa, keebaa fiican in laga shaqeeyo Windows?